SIDA LOO DOORTO SAXBAAXADA GURIGA SI SAX AH - KUFSI
Tirada ukunta la dhigay
Qalabka noocan oo kale ah waxaa loogu talagalay tiro kaladuwan oo ukun ah oo loogu talagalay. Dhamaantood waxaa loo qaybin karaa kooxahan:
Qoyska (loogu talagalay 40 - 120 ukumo, inkastoo la bixiyay iyo 200-kursi). Waxay ugu fiican yihiin beer yar.
Madaxda hoggaamiya (sida caadiga ah iyaga ka mid ah 500 ilaa 1000 unugyo);
Warshadaha ba'an (laga bilaabo 1000 ilaa 3000 "meel").
Si ay "bilaabaan" ganacsigooda, bilowga "beeralayda digaaga" waxay yeelan doonaan sanduuqyo ku filan 60 - 80 ukumood. Cabbirkan ayaa ah midka ugu caansan, marka lagu daro tusaalaha koowaad ee aan loo baahnayn, tani waxay xaqiijin doontaa beeralay kasta.
Waa muhiim! Ka hor intaan la dhigin ukumaha, waa in la iftiiminayo: waxaa ka mid ah kuwa aan khasaari karin. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa jalaafooyin khaas ah ama ovoskopov xirfad leh.
Ka hor intaadan dooran kiniin wanaagsan oo qoyskaaga ah, maskaxda ku hay in soo saarayaasha Tilmaamaha awoodda, diiradda ukunta digaaga. Waxaa cad in shimbiraha kale (berriga ama bakhtiga) shaxankan uu noqon doono mid kala duwan, marka lagu daro, waxaa sidoo kale loo baahan yahay in la soo saaro baakidh dheeraad ah.
Ha u jeesanin raqiis. Badbaadinta lacagta lagu iibsado waxay u noqon kartaa kharashyo inta lagu jiro hawlgalka. Si aad tan uga fogaato, fiiro gaar ah u yeelato sheyga ugu muhiimsan ee farsamada.
Ukumaha iftiinka ka hor inta aanad dhicin iyo inta lagu jiro mudada dhalidda waa geedi socod aad u muhiim ah. Qalabka loogu talagalay ovoskopirovaniya ma aha inaad iibsato, waxaad adigu samayn kartaa.
Waxyaabaha ay ka soo horjeeda waa la sameeyay
Qodobka ugu wanaagsan ee wax soo saarka wax-soo-saarka waa la tixgeliyaa bac ah xumbo. Ma nuugayo qoyaan, sababtoo ah kuleylka kuleylka hooseeya wuxuu awoodaa in uu kuleylka ku hayo muddo dheer. Tani waxay ku dhacdaa koronto la'aan joogta ah: xaaladahaas oo kale kuleylku wuxuu socon doonaa 4 ilaa 5 saacadood.
Xaaladda xayawaanka ayaa laga yaabaa inay noqoto midka ugu wanaagsan (dabcan, haddii uu soo saaraha uu ka hor istaago tiknoolajiyada). Hase yeeshee, "gudaha wax lagu duubo" ee qalabka sida sidoo kale maaha mid xun. Run, waxaa jira waxoogaa hoos u dhacaya: urta ayaa si dhakhso ah u nuugaya, waana dhib yar.
Ma taqaanaa? Gudaha USSR, waxay bilaabeen in la soo saaro 1928. Kuwani waxay ahaayeen xeryo waaweyn oo loogu talagalay 16 kun dhismo. Magacyada ay u baahdeen inay ciyaaraan waqtiga: "Spartak" iyo "Communard."
Popular caag ah qalabka ayaa ku habboon nadiifinta iyo jeermi-dilista. Ka hor inta aan la saarin dhismaha, dad badani ha ku daatay lakabka rinjirta kuleylka: balaastigga qorshahan ayaa ka hooseeya caag xumbo. Ma aha faragalinta tayada qalinka: jidhku waa inuu noqdo mid sahlan. Burrs, chips, iyo xitaa darbiyada xargaha badan ayaa soo jeedinaya in sheygan oo kale uusan u adkeysan doonin xaaladaha kulka ah ee kulka.
Shirkadaha dalal badani waxay ku hawlan yihiin soo saarida kulubka, sidaas awgeed waxaa jira wax la doorto. Unugyada dibedda laga keeno waxay raali ka yihiin muuqaalkooda muuqaalka ah iyo kulamo tayo sare leh (marka laga reebo laga yaabo in laga yaabo inay tahay "China"). Hase yeeshee, waxa kale oo ay leeyihiin dhibaato weyn oo ah qaabka qiimaha. Iyada oo hawlgalka aan xoq lahayn isticmaalka guriga waxay u bixin doonaan waqti dheer.
Akhri waxyaabaha ku saabsan digaagga barafka, goslings, poults turkey, shimbiraha, turkiga, quustis.
Sidaa daraadeed, waxaa fiican in aad doorbido qaababka gudaha. Haa, waxay yar yihiin kuwa ajnebiga ah marka la eego shaybaarrada, tayada xariirka mararka qaarkoodna "marmarka qaarkood". Laakiin ma jiraan wax dhibaato ah oo dayactir ah oo dayactir ah. Ku dar arrintan fududaynta qalabka - haddii ay lagama maarmaan noqoto, qayb ka mid ah fashilada ayaa lagu beddeli karaa gacmahaaga (inta badan waa unugyo is-diyaarin ah ayaa sidoo kale loo isticmaalaa).
Diyaarinta kuleylka, waqtiga wareega ee ukunta ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya. Dhamaan kuwa casriga casriga ah, tan waxaa lagu qabtaa mid ka mid ah siyaabahan soo socda:
Buug-yarahan. Ma aha mid ku habboon qof kasta, oo leh calaamad ballaaran oo waqti badan qaadata (waa inaad si gooni ah u dhigtaa ukumaha).
Waa muhiim! Xaaladda qaabka, nadiifinta gacmaha ayaa ah mid muhiim ah. Marka kormeerku uu dhaco, microbes ayaa si sahlan u gali kara daloolada ukunta waxayna hoos u dhigtaa horumarka embriyaha.
Mechanical. Halkaan way fududahay - waa ku filan tahay inaad xakamayso xakamaynta wakhtigaa, taas oo u rogeysa weelasha ayadoo loo marayo jahwareerka lagama maarmaanka u ah adigoo isticmaalaya kabaal ama kabaal. Doorasho weyn ee bilowga ah.
Waxaa jira hab kale oo soo jiidanaya kuwa u maleynaya sida loo doorto iskudhaf casri ah oo casri ah. Horeba magaca magaca waa cad yahay sida qalabku u rogi doono. Wax kasta waxay u muuqdaan kuwo fudud - waxay ku cadaadiyeen badhanka, iyo gawaarida ama riixa markiiba isla markiiba waxay sameeyaan saxaarada ama ukunta naftooda. "Kalsooni" ayaa tilmaamaya qaababka soo socda ee wareegga:
Qaadashada diyaarad siman (waxaa jira halis waxyeello).
U dhaqaaqo ukunta joogtada unugyada roogga.
"Is-warshadaynta" waxay kuxidhaa tareemada 45 ° ah.
Dabcan, tani waa habka ugu habboon, laakiin waxaa jira hal nuuc. Farsamooyinka firfircoon waxay "qarin karaan" meesha ku dhexjirta maskaxda, qaar badan ayaa doorbidaya "macmiilka fudud".
Ma taqaanaa? Digaagga ma aha arrin nacas ah, sida caadiga ah la rumaysan yahay - waxay awood u leeyihiin inay ku riyoodaan, iyo wejiyada nasashada sida kuwa dadka kale ah. Intaa waxaa dheer, geedi socodka horumarinta, "diga" ayaa bartay "si tartiib ah": iyadoo kala badh ka mid ah maskaxdu hurudo, shuqullada labaad, digniin ah muuqaalka muuqaalka.
Ogsoonow inaysan jirin qalab wax lagu beddelayo gacmahii mulkiilaha - waa in la dhigo maalin kasta oo la qaboojiyo. Si kastaba ha ahaatee, shirkaduhu waxay tixgeliyeen waqtigan.
Su'aal kale oo horay loo soo iibsaday ayaa ah nooca kuleylka uu ku fiican yahay kuleylaha. Jawaabtu waa caddayn: doorbidayaa dijital. Waxay leedahay faa'iidooyin cad:
Meel heerkulka saxda ah si looga caawiyo in laga fogaado kulaylka ama kulaylka. Cadee heerka saxda ah ("garoonka" waa uu ka duwanaan karaa - inta badan waa 0.1-0.5 °, inkastoo ay jiraan dhowr qalab oo leh stroke of 0.01 °).
Kharashka qadar yar. Ma ahan kuwo ka qaalisan kuwa farsamada.
Waa inaan sidoo kale sheegnaa "walxaha" ee maamulka. Haddii qalabka loogu talagalay in lagu daro 0.1 °, ka dibna weydii wixii mas'uul ka ah soo rogidda qalabka kuleylka (xarigga kuleylka): habka triac ama raadka caadiga ah. Midka koowaad waa mid la isku halleyn karo, laakiin waa mid aad u macquul ah isbeddelka shabakadda, iyadoo shaxdadu ay u nugul yihiin gubashada.
Fanaanka iyo hawada hawada
Joogitaanka waa suurad wacan, laakiin aan loo baahnayn. Xaqiiqdu waxay tahay in qaababka ugu fudud hawada ayaa galaya iyada oo loo marayo godadka lagu sameeyo korein, wadar ahaan, oo leh heer-kuleyliye shaqeynaya wuxuu bixiyaa "jawi" oo la rabo.
Waa muhiim! 3 - 4 maalmood ee ugu horeeya ee hawada qashin qubka lama fulin. Marka kamaraduhu ay kulmaan, maalinta 4aad, hawada ugu yar ee hawada ayaa lagu sameeyaa qoyaan ah 50%, ka dib 5aadna waxaa si tartiib tartiib ah u kordhaya, iyada oo keeneysa ugu badnaan 18 maalmood.
Beeralayda digaagga ee khibrad leh waxay og yihiin in qaboojiyaha yar-yar oo taageera xooggan aan loo baahneyn. Laakiin qiyaasaha qumman ee awoodda leh 60 ukumood, waa loo baahan yahay. Waa muhiim iyo meesha ay ku taal. Haddii ay ku taal bartamaha daboolka, wax waliba waa caadi: hawadu si degan ayey u gaari doontaa dhammaan xaglaha.
Awoodahan oo kale waxay noqon doonaan kali ah. Run, batteriyaal oo lagu iibiyo qalab qaali ah naftooda ayaa kharash badan. Marka iftiinka la demiyo, waxay ku shaqeeyaan iyadoon wax dhibaato ah la geli karin tamarta korontada ee awoodda hoose.
Quudinta ku habboon ee digaagga, goslings, broilers, digaagduur, digaagaha mooska laga bilaabo maalmaha ugu horreeya ee nolosha ayaa ah saldhig u ah taranka guusha.
Haddii aad ka fikirto oo aad xisaabiso, waxaa soo baxday in milkiilaha biilka guriga ee yaryar aan dhab ahaan loo baahnayn - 2-3 saacadood oo aan xabbad-joojin koronto ku hayn. Laakiin meel kasta ha ahaato shaqada shabakadaha (iyo dayactirka) waa mid deggan. Kadibna waa inaad soo xirtaa, ama waxaad ku dareysaa batariga baabuurta wata korriin ama qalabka 12-wiishka. Tani waxay sidoo kale u baahan tahay kharash iyo xirfad.
Hantida qalabyada waaweyn, oo u shaqeynaya "furriin", uma baahna inay doortaan: wax khatar ah ma heystaan, markaa ma samayn kartid batariga.
Warranty iyo adeegga iibka kadib
Ka hubi iibsadaha shuruudaha damaanada iyo dayactir suurtagal ah - tiknoolijiyada la isku halayn karo ma dhicin. Halkaan waxaa ka faa'iideysanaya qalab dheeraad ah ee qalabkayaga: mararka qaarkood, waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa kuwa soo saaraha.
Ma taqaanaa? Qof kasta oo ka mid ah meeraha waxaa ku jira 3 digaag.
U hubso inaad akhrido tilmaamaha, fiiro gaar ah u leh habka socodka koowaad iyo qaabka hawlgalka wakhtigan. Sidoo kale, ha ilaawin in iibsadaha uusan laheyn xuquuq kaliya, laakiin sidoo kale waajibaadka. Gaar ahaan, ha ku degdegin inaad isla markiiba isbeddel ku sameyso qalabka (sida "rasyonis" waa mid leh dammaanad dammaanad ah).
Hadda akhristeyaasheena waxay ogyihiin waxa ay tahay in la raadiyo markaad dooranaysid. Waxaan rajeyneynaa in hadda aad si sahal ah u heli doonto isugeyntii lagu kalsoonaan karo ee guriga oo shaqeyn doona iyada oo aan wax dhicin sanado badan. Nasiib wacan ee dayrka!